Daawud Ibsaa: ‘Wal cabsuufi wal ukkaamsuurra walitti dhufnee mari’achuutu fala’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDaawud Ibsaa: ‘Wal cabsuufi wal ukkaamsuurra walitti dhufnee mari’achuutu fala’
Paartileen siyaasaa biyya keessaa hundi walitti dhufnee mariyachuun rakkoo biyyaa furuu qabna jedhan Obbo Daawud Ibsaa.
(bbcafaanoromoo)–ABO’n ibsa baaseen rakkoo wal xaxaan siyaasa Itoophiyaa kan hiikkachuu danda’u paartileen siyaasaa hundinuu yoo hirmaatan qofadha jedha.
Obbo Daawud naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dabalatee rakkoon nageenyaa mudatee jiru uummatni akka yaaddoo keessa jiraatu taasiseera jedhanii rakkinicha hiikuuf ammoo mariin walitti fufinsaan paartilee gidduutti tahaa jiru waan hin jirreef yaaddoo qabnuu fi furmaatadha jennee kan itti amanne ibsine jedhan.
Obbo Daawud gaaffif fi deebii BBC waliin taasisan irratti rakkoon Itoophiyaa mudachaa jiru waggoota dheeraaf kan walirra kuufamaa turedha jedhan.
Paartileen siyaasaa wal dhiibuu dhiisuun walitti deemnee mari’achuun biyya rakkoo keessaa baasuu qabna kan jedhan Obbo Daawud paartiin isaanii yeroo jijjiiramichi eegale irraa eegaluun tatafataa tureera jedhan.
Paartileen Oromoo walitti dhufnee mari’achaa turrus paartilee Oromiyaa ala jiran waliin walitti dhufnee sagantaa maalii qabdu jennee wal gaafachuun haalaan wal hin barre jedhan.
Garaagarummaa qabnus ifatti wal hubachiisnee socho’uun ni danda’ama jedhan. Kanaafuu wal hubachuun biyyaaf waan barbaachisu irratti qooda keenya bahachuu qabna jedhan.
Paartiin isaanii ABO’n paartilee Oromoo kaan waliin dhimmoota nageenyaa, dinagdee, siyaasaa, daangaa Oromiyaa fi safuu waliif qabaachuu irratti wal taaneerra jedhan.
ABO’n rakkoo biyya mudachaa jiru furuuf qooda isa irraa barbaachisu bahachuuf qophiidha jedhanii Gaaddisa paartilee Oromoo jalattis yaadota irratti waliigalle hojiitti hiikuu irratti harkifannaan jiraatus akka waliin hojjechaa jiran himaniiru.
Afaaniin qofa araara, nageenyaa fi badhaadhina dubbachuun qabatamaatti fiduu hin danda’u jennee amanna jechuun ABO’n ibsa isaa keessatti eereera.
Waadaawwan akkasii yeroo baay’ee kan dubbatan MM Abiy Ahmad yoo tahu, ibsicha keessatti eeruu kan barbaaddan bulchiinsa Abiy moo paartilee kaanis hammata gaaffii jedhus Obbo Daawud rakkoon kun kan hunduma keenyaati jedhan.
Nuyi ofii keenya qulqulluu goonee rakkoo uumameef qaama biraa qofatti quba hin qabnu jedhanii hunduma keenya waan ilaallatuuf waliin taanee irratti hojjechuu qabna jedhan
Paartileen siyaasaa wal dhiibuu fi ukkaamsuu hin qaban kan jedhan irratti paartii kamtu isa kaam irratti kana raawwata? kan jedhu irratti kun aadaa siyaasa biyya kanaati jedhan.
Bara mootummaa Dargii irraa eegalee biyya kana keessatti wanuma barame waan taheef ammas gara sanatti akka hin deebineef wal yaadachiisuun barbaachisaadha jedhan.
ABO’n filannoo bara kana gaggeeffama jedhamee eegamaa jiru irratti hirmaachuuf galmaa’ee waraqaa ragaa beekkamtii kennu Boordii Filannoo Biyyaalessaa irraa fudhateera.